Trangam-piarahamonina Nisoloky 400.000 ariary ilay pretra sandoka
Naverina niakatra fampanoavana omaly, tetsy Anosy, ny pretra sandoka iray, 63 taona. Nisoloky olona maromaro izy ka tratra ny farany. Milaza izy fa mompera avy any Moramanga.
Tatsambo Malagasy Maherin’ny 500 tsy mbola tafody
Tatsambo Malagasy maro no mbola tavela ivelan’i Madagasikara kanefa te hody an-tanindrazana.
Fanampiana hiatrehana fihibohana Samy miandry ny fitetezam-baravarana
Hatramin’izao dia mbola samy velom-panontaniana ny ankamaroan’ireo mponina eto Analamanga mikasika ny resaka fitetezam-baravarana na “porte à porte” hanaterana fanampiana ireo mponin’ny faritra Analamanga hiatrehany izao fihibohana izao.
Tsena Soamanatombo Arahi-maso akaiky ireo mpivarotra
Ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus dia mitohy hatrany ny fanentanana ireo mpivarotra ny entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro ny amin'ny tokony hikatonan'ny tsena amin’ny 12 ora atoandro tsy diso.
Fampiasana trano fivoahana tsy vita Samy voasazy ilay nanao maloto sy ilay noratrainy
Niakatra fitsarana tamin’ny alatsinainy 29 jona lasa teo, tao amin ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antalaha, ilay raharaha fampiasana trano fivoahana mbola tsy vita nisian’ny fandratrana olona roa.
Tahirim-bary Tsy misy ahiana mandritra ny fihibohana
Mpiasan` ny ministeran` ny varotra miisa 200, izay ahitana “commissaires” sy “controleurs”
Antananarivo Hatsaraina amin’ny tetikasa Water III ny famatsian-drano
Hohatsaraina ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Nankatoavin’ny Antenimeram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona, ny herinandro lasa teo ny fanatanterahana ny tetikasa JIRAMA Water III, izay miompana amin’ny fanitarana ireo foto-drafitrasa famatsian-drano eto an-drenivohitra.
Noho izany, ny JIRAMA, amin’ny maha sampan-draharaha misahana ireo filàna andavanandron’ny mponina azy dia manatanteraka ny drafitra ara-tsosialy amin’ny hamehana ka mandray hatrany ny fanapahan-kevitra ho fanamaivanana ny vesatra ho an’ireo mpanjifa izay mbola ao anatin’ny fihibohana. Ho an’ireo faritra mbola ao anatin’ny fihibohana toa an’Analamanga,Atsinanana ary Alaotra Mangoro noho izany, dia mbola afaka manemotra ny fanefana ny faktiora volana jona ny mpanjifa rehetra. Rehefa miverina amin’ny laoniny ny fianana andavanandro dia afaka hefaina tsikelikely isam-bolana izany ao anatin’ny 5 volana. Raha sanatria misy kosa tsy fahafahana manokana na fahasahiranana dia afaka mifampiresaka amin’ny JIRAMA ny handoavana izany hatramin’ny 10 volana. Ireo faktiora hefaina tsikelikely dia hozaraina miaraka amin’ny faktioran’ny fandaniana isam-bolana. Manana safidy ihany koa anefa ny mpanjifa raha hanefa avy hatrany ny faktiorany. Ankoatra ny eny amin’ny masoivoho JIRAMA dia azo aloha eny amin’ny Biraon’ny Paositra Malagasy, BOA, Accès Banque izany na amin’ny « Mobile Money » (Mvola, Orange Money, Airtel Money) izany.